Xildhibaano iyo Siyaasiyiin ku kala aragti duwanaaday arrinta Qalbi dhagax – XAMAR POST
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan kaga hadlay xiisadda la xiriirta C/kariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax.
Xildhibaan Maxamuud Abuukaate, oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dhaliilay in dowladda Itoobiya loo gacan geliyo C/kariin Qalbi Dhagax, wuxuuna musiibo ku tilmaamay in muwaadin Soomaaliyeed dowlad kale loo gacan geliyo.
“Waxay runtii noqotay Layaab dadku aad ula yaabeen,waana mid aan sinnaba loo qaadan karin muwaadin Soomaaliyeed oo dhulkiisii jooga in loo gudbiyo cadow la og yahay wuxuu kala kulmayo, waxay arintaasi dhaawac ku tahay jiritaanka iyo sumcadda Soomaalinimada, waxay dhaawac ku tahay dastuurka noo yaal ee KMG qodobkiisa 36’aad”ayuu yiri xildhibaan Abuukaate.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa isagana ka hadlay arrintan, wuxuuna hadalkiisa u muuqday mid dowladda Soomaaliya uu ku difaacayo inay ku saxneyd qaabka ay u wajahday kiiska Qalbi Dhagax.
“Shaqsiga ONLF ka tirsan ma Soomaaliya ayuu ONLF u yahay oo uu la dagaalamayay mase Itoobiya la dagaalamayay ? Itoobiya haddii uu la dagaalamay Itoobiya ayaa xaq u leh inay raadsato oo ay qabsato oo ay dacweyso, runtaan ka hadlayaa, annaga ONLF ma nihin, Soomaaliya ONLF ma ahan, Soomaaliya dal burburay oo aan rabno siyaasidiisa inuu soo kabto waayo”ayuu yiri Dahir Amiin Jeesow.
“Inaan amnigeena gacanta ku qabano waaye, laakiin dano ONLF ah dalkeena uma burburineyno annaga”ayuu hadalkiisa ku sii daray xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Siyaasi Salaad Cali Jeele oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka hadlay arrimaha maalmahaan aad loo hadal hayay oo ku aadan dhiibitaanka C/kariin Qalbi Dhagax.
“Sida aad wada og tihiin ninka laga hadlaayo sida la sheegay waa ururka ONLF nin ka tirsan waxaadna og tihiin Soomaaliya marxaladda ay maanta mareyso ineynan Jabhad caawin karin, maadaama marka aysan jabhad caawin karin, aadna 0g tihiin horey in jabhadahaasi loo caawiyay oo qaranka Soomaaliyeed uu ku fashilmay oo dowladi hore ay ku burburtay”
“Marka waxaa loo baahan yahay in si xil kasnimo leh oo waxgaradnimo leh oo anaga xaalada aan ku jirno qalqal siyaasadeed iyo qatar aan gelineyn in arinta loo wajaho”ayuu yiri Salaad Cali Jeele.
Dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa sheegay in arrintan lagula xisaabtami doono dadkii masuuliyadeeda lahaa.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa wali ka hadlin arrintan, waxaana aamusnaanta dheeraatay ay abuureysa shaki badan, waxaana dad badan ay saadaalinayaan in kiiska Qalbi Dhagax uu dalka u keeno qalalaaso siyaasadeed oo saameyn ku yeesha hey’adaha dowladda.